Imishini ye-China Laboratory ene-ultrasonic enebhokisi elingenamazwi Ukukhiqiza neFektri | Precision Hangzhou
Ukuxutshwa kwempuphu kube uketshezi kuyisinyathelo esivamile ekwakhiweni kwemikhiqizo ehlukahlukene, njengopende, uyinki, imoto, iziphuzo, noma imithombo yezindaba epholisha. Izinhlayiya ngazinye zibanjwa ndawonye ngamandla okuheha ezinhlobonhlobo zomzimba nezamakhemikhali, kufaka phakathi amabutho e-van der Waals kanye nokungezwani kobuso bamanzi. Lo mphumela unamandla oketshezi oluphezulu lwe-viscosity, njengama-polymers noma izinhlaka. Amandla okuheha kufanele anqotshwe ukuze kususwe igama kanye nokusabalalisa izinhlayiya zibe yimithombo yezindaba engamanzi.
I-Ultrasonic cavitation oketshezi ibangela amajetshi wejubane ajwayelekile we-1000km / h (approx. 600mph). Ama-jets anjalo acindezela uketshezi ngomfutho ophakeme phakathi kwezinhlayiya bese uzihlukanisa. Izinhlayiya ezincane ziyasheshiswa ngamajets e-liquid futhi zishayisane ngesivinini esikhulu. Lokhu kwenza i-ultrasound kube yindlela ephumelelayo yokuhlakazeka nokwenziwa kwe-deagglomeration kepha futhi nokugaya nokugaya okuhle kosayizi we-micron nosayizi wezinhlayiyana ezincane.
Imishini ye-Laboratory ye-ultrasonic enebhokisi elingenawo umsindo ilungele inkampani esebenzisa i-lab noma inkampani yezimboni ukwenza ukuhlolwa ngaphambi kokusebenzisa ulayini wokusebenza we-ultrasonic.
Amandla Usayizi 1.0Kw
Amandla wokufaka 110 / 220V, 50 / 60Hz
Amandla ashintshekayo 50 ~ 100%
Hlola ububanzi 16 / 20mm
Ububanzi beShell 70mm
Uphondo ubude 195mm
I-Generator I-digital generator, ukulandelela okuzenzakalelayo kwemvamisa
Icubungula umthamo 100 ~ 2500ml
I-viscosity yezinto ezibonakalayo 0006000cP
Langaphambilini imishini yokuxuba ye-ultrasonic wax emulsion
Olandelayo: Isisetshenziswa se-Ultrasonic cosmetic dispersion emulsification